အလွိုင်း 2205 သံမဏိကွိုင်ပြွန်
အလွိုင်း 2507 သံမဏိကွိုင်ပြွန်
625 stainles alloy သံမဏိကွိုင်ပြွန်
825 သံမဏိကွိုင်ပြွန် alloy
ASTM 316L သံမဏိကွိုင်ပြွန်
သံမဏိ heat exchanger ပိုက်
2205 (UNS S31803) သံမဏိ exchanger ပိုက်
304 သံမဏိ exchanger ပိုက်
316 သံမဏိ exchanger ပိုက်
316L tainless သံမဏိ exchanger ပိုက်
317 သံမဏိ exchanger ပိုက်
321H သံမဏိ exchanger ပိုက်
410 သံမဏိ exchanger ပိုက်
201 သံမဏိ Precision ပိုက်
202 သံမဏိ Precision ပိုက်
304 သံမဏိ Precision ပိုက်
အလွိုင်း 625 သံမဏိ Precision ပိုက်
အလွိုင်း 825 သံမဏိ Precision ပိုက်
TP 316L သံမဏိ Precision ပိုက်
သံမဏိစာရွက် & ပြား
304 သံမဏိစာရွက် & ပြား
316 သံမဏိစာရွက် & ပြား
321 သံမဏိစာရွက် & ပြား
409 သံမဏိစာရွက် & ပြား
410 သံမဏိစာရွက် & ပြား
430 သံမဏိစာရွက် & ပြား
ASTM A269 alloy2205 သံမဏိ coil Tube
AISI 316 သံမဏိ coil Tube ပေးသွင်း
SUS 310S သံမဏိ coil Tube ပေးသွင်း
AISI 316 316L သံမဏိဆံချည်မျှင်သွေးကြောပြွန်
ASTM A269 အလွိုင်း 2507 (s32750) သံမဏိ coil ပြွန်ပိုက်ပေးသွင်း
သံမဏိစူပါဒျူပလက် 2507 မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုလိုအပ်ခဲ့ကြအလွန်အမင်းတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအခြေအနေများနှင့်အခြေအနေများကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စူပါဒျူပလက်များတွင်အမြင့် molybdenum, ခရိုမီယမ်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်အကြောင်းအရာ 2507 ပစ္စည်း pitting နှင့် crevice ချေးကိုဆီးတားကိုကူညီပေးပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိုလည်းတိုက်စားမှုချေးရန်, ချေးပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရန်, အက်ဆစ်အတွက်ယေဘုယျချေးရန်, စိတ်ဖိစီးမှုချေးလောင်သောအသံ chloride မှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒီအလွိုင်းကောင်းသော weldability နှင့်အလွန်မြင့်မားစက်မှုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။
သံမဏိတန်းစူပါဒျူပလက်စ 2507stainless သံမဏိ coil Tube / ကွိုင်ပြွန်
★သံမဏိ coil ပြွန်ပြွန်သတ်မှတ်ချက် coiled
စံချိန်စံညွှန်းများ: ASTM A269 / A249 စံ
ကုန်သွယ်ရေးအမည်: SS304 coil Tube, SS316 coil Tube, ဒျူပလက်စကွိုင် Tube, Monel 400 coil Tube, Hastelloy coil Tube, Inconel coil Tube, 904L coil Tube, ချောမွေ့စွာ coil Tube, ဂဟေဆော် coil Tube
သည်းခံစိတ်: OD ± 0.1mm, နံရံအထူ: 10% ±, အရှည်: 5mm ±
6.Length: 300-3500M / ကွိုင်
ထုပ်ပိုး: သံ pallet, သစ်သား pallet, Poly အိတ်
လျှောက်လွှာ: အအေးပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေငွေ့ပျံ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အရည်ပေးပို့, condenser, အဖျော်ယမကာစက်
4. ပြည်နယ်: ပျော့ / တစ်ဝက်ပျော့ / ခက်ခဲတောက်ပ annealing
5. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: ပြင်အချင်း 6.52mm-20mm, နံရံအထူ: 0.40mm-1.5mm
သည်းခံစိတ်အကွာအဝေး: အချင်း: + 0.1mm, နံရံအထူ: + 10%, အရှည်: -0 / + 6mm
အရှည်: 800-3500M သို့မဟုတ်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များအရသိရသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ: မျက်နှာပြင်ချောနှင့်ဒဏ်ငွေ, ယူနီဖောင်းနံရံအထူ, သည်းခံစိတ်တိစသည်တို့ ..
သံမဏိ coil ပြွန်၏လေ့အရွယ်အစား: သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ်ကျနော်တို့နိုင်ပါတယ်ထုတ်ကုန်သူတို့ကို။
အလွိုင်း 2507 သံမဏိ coil Tube coil ပြွန်တရုတ်ပေးသွင်း
သံမဏိတန်းစူပါဒျူပလက် 2507 ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။
1,20 max ကို
0,80 max ကို
0.50 max ကို
နိုက်ထရိုဂျင်, N ကို
ဖော့စဖရပ်, P ကို
0,035 max ကို
0,030 max ကို
ဆာလဖာ, S ကို
0,020 max ကို
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Properties ကို
သံမဏိတန်းစူပါဒျူပလက် 2507 ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုအောက်တွင်စာရင်းပြုစုထားသောနေကြသည်။
7.8 g / စင်တီမီတာ 3
အတွက် 0,281 ပေါင် / 3
2460 ° F ကို
▼ သံမဏိ coil ပြွန် / ကွိုင် Tube ဘုံအရွယ်အစားအကွာအဝေး
သံမဏိ coil Tube ၏ Size ကို
316L, 304L, 304 အလွိုင်း 625 825 2205 2507
▼ S ကtainless သံမဏိ coil ပြွန် coil Tube စတော့ရှယ်ယာအကွာအဝေး
သံမဏိ coil Tube / coil Tube
▼ သငျသညျအောကျဖျောပွနိုင်ငံများရှိတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောသံမဏိ coil Tube / ကွိုင်ပြွန်ကုန်သည်ဖြန့်ဖြူးရှာနေနေ:
★ သံမဏိ coil ပြွန် / coil Tube ကတခြား garde:
ဌသံမဏိ 304 coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 304L coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 304H coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 316 coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 316L coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 316H coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 317L coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 321 coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 347 coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 410 coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 904L coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 310S coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 310 coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 310H coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 316Ti coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 321H coil Tube / coil Tube
ဌသံမဏိ 347H coil Tube / coil Tube
ကျနော်တို့ကသံမဏိ coil ပြွန် / ပိုက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။
ယင်းပိုက်၏အရှည် 3500M / coil ထက်ပိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသံမဏိ coil ပြွန်သုံးခုထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, သံမဏိပိုက်ကျနော်တို့ဆန့်, ဦးထက်ပိုဆယျနှစျအတှကျ Bende အတွေ့အကြုံကိုတင်ပို့ခဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့သံမဏိထုတ်ကုန်, အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများတစ်စီးရီးအပေါ်ဒါဖြတ်တောက်နေမှုကိုချေဖျက်, polishing မြင်၏ထားပါတယ် ကျယ်ပြန့်နိုင်အောင်အပေါ်ရေချိုးခန်းဆွဲပြား, ကြိုးကွင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ရေအပူပေးကိရိယာများ, ဟိုတယ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားဖောက်သည်ရေးဆွဲသို့မဟုတ်နမူနာများကိုကြောင့်မျှော်လင့်ပါတယ်။
▼ သံမဏိ၏အကျယ်ဆုံးအကွာအဝေး 304 ချောမွေ့စွာအတွက် welded သွယ်တန်းထားသောပိုက် & Tube Shandong တရုတ် .
ဇယား 9.52mm အမျိုးအစား 304 သံမဏိပိုက် ဇယား 40 အမျိုးအစား 304 သံမဏိပိုက်
ASTM 5564 1/8 "ချောမွေ့စွာ Tube coil Tube ပွတ် 304 သံမဏိပြွန်
304 သံမဏိ Threaded ပိုက် Susd 30304 သံမဏိ Rectangular Tube
JIS ဘီ SUS304 ချောမွေ့စွာ Tube 304 အက်စ်အက်စ်က Round Tube ပေးသွင်း
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များအတွက်အက်စ်အက်စ် 304 ဂဟေ Tube AMTM 5560 ချောမွေ့စွာ Tube ပေးသွင်း
ASTM A312 TP304 coil Tube သံမဏိ Inox 304 သွေးကြောမျှင်ကလေးများ၏ Tube
ASTM A312 ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း TP 304 လေကြောင်းပြွန် AMS 5566 အမြင့်ဖိအား Tube
SA213 TP 304 မျက်မှောက် Tube 304 သံမဏိပိုလန်သွယ်တန်းထားသောပိုက်ရိုက်ပါ
ASTM A312 TP304 Elliptical နှင့်ဘဲဥပုံ Tube AMS 5567 Rectangular Tube
ASTM A213 TP304 ငွေ့ရည်ဖွဲ့ Tube AMS 5563 1/4 "* 0089" ချောမွေ့စွာချောမွေ့စွာသံမဏိပြွန်
ASTM A269 TP304 ဖြောင့်ပြွန်ဘွိုင်လာ AMS 5563 ဂဟေမီးဖိုထဲပြွန်
ASTM A249 TP304 ကြေးမုံ Tube AMS 5564 1/8 "ဂဟေဆော် Tube, High-ဖိအား Hydraulic
UNS S30400 Pitot Tube stockist သံမဏိ 304 ချောမွေ့စွာက Round tube
ASTM A358 TP304 ပိုလန် Tube 304 သံမဏိတန်ဆာဆင် Tube
သံမဏိ 304 exhaust ပိုက် 304 သံမဏိခရုပိုက်
ASME SA213 TP304 ဖောက်ထား Tube WERKSTOFF ရော်ဘာ။ 1,4301 Flexible Tube
SA 688 TP304 Finned Tube အက်စ်အက်စ် 304 ချောမွေ့စွာသံမဏိ coil Tube
1,4301 AISI 304 ဖောက်ထားအိပ်ဇော Tube din သံမဏိ 304 Hypodermic Tube
W.-Nr. din 1,4301 Aisi 304 မြှောင်းပုံ Tube အက်စ်အက်စ် 304 Honed Tube
ပစ္စည်း 1,4301 Aisi 304 slot Handrail Tube အက်စ်အက်စ် 304 ထူးအိမ်သင်အမှတ်တရ Tube
ASTM 3/8 "* 0,035" သံမဏိ coil ပြွန် 304 သံမဏိ Threaded ပိုက်
သံမဏိ 304 တန်ဆာဆင်ပိုက် သံမဏိ 304 တောင် Tube / Finned Tube
S30400 သံမဏိဦးပုံသွင်း Tube 304 သံမဏိရင်ပြင် Tube ကြေးမုံ Finish ကို
1,4301 ပစ္စည်းလေဟာနယ်ပြွန် din ASTM 6.35 * 1.24 သံမဏိ coil Tube
304 သံမဏိ Rectangular ပိုက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပ်ဘို့ 304 သံမဏိ Hypodermic Tube
ultra-အမြင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ် Electropolished သံမဏိ 304 Tube ထူးအိမ်သင်အမှတ်တရသံမဏိ 304 Tube
1,4301 သံမဏိ Annealed Tube din 304 သံမဏိ coil Tube အပူ Exchange
SAE J405 Uns S30400 ထူးအိမ်သင်အမှတ်တရ Tube 304 သံမဏိ Metric Tube
304 သံမဏိချောမွေ့စွာရင်ပြင် Tube အကြီးစားအချင်း 304 သံမဏိ Tube
304 သံမဏိပိုက်စီတန်း ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံအဘို့အ Corrugated 304 သံမဏိ Tube
ASTM A269 သံမဏိ coil Tube 304 သံမဏိရှိ Instrumentation Tube
9,52 * 1.24MM coil Tube 304 သံမဏိရင်ပြင် Tube
high-ဖိအား 304 သံမဏိရေပိုက် သံမဏိ 304 ဆဋ္ဌဂံပိုက်
JIS ဘီ 304 သံမဏိ coil Tube သံမဏိ 304 ဘွိုင်လာ Tube
ယခင်: ASTM alloy 2507 Seamless Stainless Steel Coil Tubing Coiled Tubes
နောက်တစ်ခု: ASTM 316L Seamless Stainless Steel Coiled Tubes Coil Tubing China Factory
ASTM A269 304 ကွိုင်ပိုက်
သံမဏိ coil Tube ကုမ္ပဏီများ
သံမဏိ coil Tube စက်ရုံ
သံမဏိ coil Tube ထုတ်လုပ်ခြင်း
သံမဏိ coil Tube ထုတ်လုပ်သူ
သံမဏိ coil Tube စျေး
E-mail ကို: alice@shstainless.com